China Kupisa Inotengesa N95 masiki inogadzira michina fekitori nevatengesi | ICT
Otomatiki N95 Mask Kugadzira Muchina
Otomatiki Flat Masiki Kugadzira Mashini
Otomatiki Kombe Masiki Kugadzira Muchina
Otomatiki Masiki Packing Machine
Laser Kuisa Mashini
Pepa Bhegi-Kugadzira Muchina
Industrial Robhoti System Solution
Unmaned drone ine kamera
Kupisa Kutengesa N95 masiki kugadzira muchina
Mushure meWarranty Service:
Vhidhiyo yehunyanzvi hwekutsigira, kutsigira kwePamhepo, zvikamu zveSpar
Local Service Nzvimbo:
Mushure mekutengesa Service Yakapiwa:
Mahara epasipi zvikamu, Vhidhiyo yehunyanzvi rutsigiro, Online rutsigiro
Key Kutengesa Points:
3,6 matanda emachira upamhi≤260 Nguo diameter≤650mm
Delta / M yepakati uye yakakura PLC, inofamba inodzora
Robhoti izere otomatiki N95 kupeta masiki yekugadzira mutsara
120mmx220mm (Wedzera Kukura)
Sheet simbi ruvara
isina stainless simbi yekutanga color 1 / spray beige
aluminium proflile ruvara
aluminium anodized / chrome yakaiswa
220VAC 土 5% 50HZ Ground chengetedzo yakaiswa simba 16.6Kw
Delta / YAMAHA / FANUC Nzvimbo ina axis
Delta / Mitsubishi yepakati uye yakakura PLC, inofambisa controller
Mainini pneumatic zvikamu
Ultrasonic kuumbwa zvinhu
Kutakura & Kuendesa
Mask kugadzira michina ichave yakarongedzwa mumatanda ematare uye ichasimbiswa kana zvichidikanwa.
N95 Folding mask kugadzira muchina zvinyorwa
Kuenzaniswa neyechinyakare N95 masiki muchina, mashandiro anoita mutsara wekugadzira weN95 marobhoti mask muchina akatsiga, uye inowedzera kugona kubvisa anomalies, ayo anopfuura 400% yakakwira kupfuura yakajairwa muchina
* Pre-Kutengesa Service
1.Inquiry uye kubvunza rutsigiro, nyanzvi kurongedza mhinduro yemahara.
2.Machine mavhidhiyo ereferensi yako.
3.Sampi yekuyedza rutsigiro.
4. Wona yedu Fekitori.
* Mushure mekutengesa Service
1. Manyoro / Mavhidhiyo ekuisa muchina, kugadzirisa, kuisa, kugadzirisa zviripo iwe.
2. Kana paine chero matambudziko akazoitika uye iwe usingakwanise kuwana mhinduro, Telecom kana Online kumeso kutarisana kutaurirana kunowanikwa maawa makumi maviri nemana.
3. ICT mainjiniya & matekiniki aripo ekutumira kune yako nyika kune masevhisi kana iwe uchibvuma kubhadhara mari inoshandiswa.
4. Muchina wacho uchave neyaka-gore rewarandi yemuchina, 2 makore waranti yechikamu chemagetsi. Munguva yewarandi gore kana paine chero zvikamu zvakaputswa kwete nevanhu. Isu ticha yemahara kubhadhara kutsiva iyo nyowani yako iwe. Waranti ichavamba mushure mekuti muchina watumira isu tagamuchira iyo B / L.
1: Nzira yekuwana sei Packing muchina wakanakira chigadzirwa changu?
Ndiudze nezvako zvigadzirwa. 1. Ndeupi rudzi rwechigadzirwa iwe chauinacho. 2. Ukuru hwechigadzirwa chako (kureba, upamhi, uye kukwirira).
2: Injiniya iripo yekushandira mhiri kwemakungwa?
Ehe, asi mari yekufambisa inobhadharwa newe. Saka chaizvo kuti uchengetedze mutengo wako, tichakutumira vhidhiyo yeizere yemuchina yekuisa uye nekukubatsira iwe kusvika kumagumo. 3. Iwe uri fekitari kana kambani yekutengesa? Isu tiri fekitori, uye kunyanya R&D, kugadzira uye kutengesa akasiyana-siyana ekutakura zvinhu. Isu takaita basa rekutakura R&D uye kugadzirwa kweanopfuura makore gumi. 4. Ndeipi yako nzira yekubhadhara?
T / T neakaundi yedu yekubhengi zvakananga, kana neAlibaba yevimbiso yekutengesa sevhisi, kana neWest Union, kana muhomwe.
5. Tingaitei kuti tive nechokwadi nezve mhando yemuchina mushure mekunge taisa kodhi?
Usati waendesa, tinokutumira iwo mafirimu nemavhidhiyo kuti iwe uongorore mhando, uye zvakare iwe unokwanisa kuronga kuti uongororwe nemhando yepamusoro iwe pachako kana nevaunosangana navo muChina.
6. Tinotya kuti haungatitumire muchina mushure mekutumira mari yacho? Ndokumbira utarise pamusoro pedu bhizinesi rezenisi uye chitupa. Uye kana iwe usinga vimbe nesu, saka tinogona kushandisa Alibaba yekutengeserana sisitimendi sevhisi, kuvimbisa mari yako, uye kuvimbisa yako yemuchina kuendesa-nguva uye yemuchina mhando.
7. Nei tichifanira kusarudza kambani yako?
Isu tine hunyanzvi mukutakura michina kweanopfuura makore gumi, uye tinopa zviri nani mushure-pekutengesa basa. Iwe hauvadzire njodzi yekuita kwedu.
Yepfuura: ICT Instock Yakagadzirira Kutumira Yoga Yakaraswa Disposable 3ply Earloop Kuvhiya Kwekurapa Kwemeso Mask Packing Machine
Inotevera: Yakanyanya kumhanya 3 Layer Mask muviri Machine
KN95 / N95 izere otomatiki Chitupa Chiso Mask Mach ...
Otomatiki N95 Chiso Mask Kugadzira Muchina weN95 ...
Chitsva Chigadzirwa Mask Machine yekutengesa Mutengo Uk
2020 hunyanzvi uye kugona kwehunyanzvi ...
Otomatiki Disposable Kuvhiya Medical kumeso N95 ...
Wholesale inopisa kutengesa zvizere-otomatiki 3d kupeta f ...
1420-1, Chivakwa 3, International Ginza, Middle Building, Beigan Street, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang Province, China